Fiparitahan’ny laza adina :: Voasambotry ny zandary ny talen’ ny Ofisin’ny bakalorea teo aloha • AoRaha
Fiparitahan’ny laza adina Voasambotry ny zandary ny talen’ ny Ofisin’ny bakalorea teo aloha
Andro vitsy taorian’ ny nanalana azy tamin’ny toerany dia notazonin’ny zandary avy hatrany ny talen’ny Ofisin’ ny bakalorea eto Antanana­rivo teo aloha, omaly maraina tokony tamin’ny 9 ora latsaka fahefany. Voatazona izy noho ny fanahiana ho isan’ny
tompon’antoka tamin’io fipa­ritahan’ny laza adina io, araka ny loharanom-baovao. Mpa­mpianatra amin’ny sekoly tsy miankina iray eny Analakely mampanao fanampim-piana­rana na “cours” ho an’ny mpianatra sasany ihany koa no isan’ireo fito voasambotra sy voatazona eny Betongolo, hatramin’ny omaly.
Mivoatra ny famotorana momba ny fiparitahan’ny laza adina bakalorea farany teo. Nahitan-javatra betsaka ny fanadihadiana lalina nataon’ ireo zandary teny amin’ny toerana nisian’ny fitokana-monina nataon’ireo olona nikarakara ny bakalorea, eny Anosy Avaratra, tato anatin’ny andro vitsy tsy niato izay.
Navotsotra ireo mpianatra
Nitohy, omaly, ny fanolo­rana ny Fitsarana ireo olona voarohirohy tamin’ity fiparitahan’ny laza adina bakalorea ity. Naiditra am-ponja ny mpampianatra matematika iray isan’ireo valo ambin’ny folo voarohirohy rehefa natolotra ny Fitsarana tany
Fianarantsoa, omaly. Miasa any Alakamisy Itenina io mpampianatra io, araka ny loharanom-baovao. Nahazo fahafahana vonjimaika avokoa ireo voampanga hafa izay mpianatra sy kandidà nanala bakalorea avokoa.
Teto an-drenivohitra indray dia fantatra fa ny antontan-taratasy mirakitra ny vokatry ny fanadihadiana nataon’ireo zandary no nato­lotra ny Fitsarana, omaly. “Noho ny baikon’ny Fitsarana dia ny vokatry ny famotorana no hojeren’ireo mpitsara mialoha. Mandra-piandry an’izay dia voatazona ato aminay ireo voampanga, ka isan’ireo ilay talen’ny fanadinam-pirenena no sady talen’ ny Ofisin’ny bakalorea eto Antananarivo”, hoy hatrany ny loharanom-baovao. Nilaza ho tsy mbola nahalala ity vaovao ity ny sekretera jene­ralin’ny minisiteran’ny Fam­pi­anarana ambony, ny dokotera Razaranaina Jean Claude raha nanontaniana tamin’ny antso an-tariby, omaly hariva. “Tsy afaka miresaka aho fa mbola mivory”, hoy kosa Ravelonirina Sammy Gregoire, filohan’ny sendi­kan’ny mpampianatra mpikaroka sampana Anta­nanarivo raha nanontaniana.
Herisetra ara-nofo :: Lehilahy voatondro ho nanolana vehivavy manaraka fitsaboana
Fiparitahan’ny laza adina :: Mpampianatra iray mpampanao “cours” naiditra am-ponja